ब्लयाक कफी पिउँनुका फाइदा र बेफाइदाहरु। - Varient - News Magazine
Jul 20, 2021 - 15:30 Updated: Jul 25, 2021 - 18:24
धेरै व्यक्तिहरू बिहान उठेपछि आफूलाई स्फूर्ति दिन र ऊर्जाले भरिपूर्ण हुन,कफी पिएर आफ्नो दिनको सुरुवात गर्दछन। कालो कफी, यो क्याफिनको एक महान स्रोत हो, यसले शरिरलाई तत्काल ऊर्जा दिन मद्दत गर्दछ जुन हामीलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्दछ। कालो कफीले तपाईको निद्रालाई कम गर्ने मात्र होइन यसले धेरै स्वास्थ्य लाभहरू पनि प्रदान गर्दछ।
तपाईं हामीले विभिन्न कफी खाइरहेका हुन्छौ तर कालो कफिमा दूध, चिनी, क्रीम वा कुनै पनि प्रकारका थप स्वादहरू समावेश हुँदैन, पानीमा कफी मात्र उमालेर खाने गरिन्छ। कालो कफीमा क्याफिनको मात्रा उच्च हुन्छ, त्यसैले कालो कफी सर्तकताका साथ सीमित मात्रामा खानु पर्छ।
यद्यपि पोषक विशेषज्ञहरूले कालो कफीको खाने बारेमा मिश्रित राय दिएका छन्। कसैले यसलाई लाभकारी ठान्छन भने, कसैले हानिकारक । त्यसो भए तपाईलाई मनपर्ने कालो कफीको बारेमा कती थाहा छ? के तपाइँलाई थाहा छ तपाइँको शरीरमा कालो कफी पिउँदा यसले के र कसरी प्रभाव पार्छ? कालो कफी पिउँदा के फाइदा र बेफाइदा हुन्छ? यस लेखमा हामी त्यस्ता सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछौं।
यदि तपाईं क्यान्लोरी, फ्याट र कार्बोहाइड्रेट अत्यन्त कम भएको पेय पर्दाथ खोज्दै हुनुहुन्छ भने कालो कफि तपाईंको लागि उत्तम पेय पर्दाथ हो। यदि तपाइँ दूध, चिनी र क्रीम जस्ता पर्दाथहरु कफिमा राखेर नियमित रूपमा उपभोग गर्नुहुन्छ भने, त्यस्ता कफी तपाईंको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन सक्छ।
सामान्यतया औंसत (२३६ मिलीलिटर) कालो कफीमाः
फ्याट0%
कोलेस्ट्रा‘ल0%
कार्बोहाइड्रेट0%
सोडियम0%
चिनी0%
पोटेशियम ४ %
तपाईंले हेर्नुभयो, कालो कफीमा क्यालोरी, फ्याट र कोलेस्ट्रोल शुन्य हुन्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि कालो कफी स्वस्थ छ मतलब यसले पोटासियम बाहेक बाँकी पोषक तत्वहरू समावेश गर्दैन।
कालो कफी पिउँदा हुने फाइदाहरु।
एन्टिअक्सिडन्ट युक्त कालो कफी तपाईको स्वास्थ्य र दिमागका लागि धेरै तरीकाले लाभदायक छ र तपाई चाहानुहुन्छ भने दैनिक ब्ल्याक कफी खान सक्नुहुन्छ। यसलाई पिउँदा हुने फाइदा यस प्रकार छन्।
१.कालो कफीले मेमोरी पावर सुधार गर्दछ।
जब मानीस बूढो हुन्छ, उसको स्मरणशक्ति र संज्ञानात्मक क्षमता खस्कन थाल्छ, जसको कारणले, व्यक्तिको उमेर बढ्दै जाँदा डिमेंशिया र पार्किन्सन रोगको जोखिम धेरै बढ्छ। यस्तो अवस्थामा, बिहान १ कप कालो कफी पिउँदा स्मृति शक्ति र दिमागी कार्यमा सुधार हुन्छ। कालो कफीले तपाईंको दिमाग र स्नायुहरूलाई दिनभरि सक्रिय राख्छ। यो मात्र होइन, नियमित रूपमा ब्ल्याक कफी पिउने व्यक्तिहरूले पार्किन्सन रोगको जोखिम ६० प्रतिशतले कम गर्दछन।
२.कालो कफी मुटुको लागि लाभदायक छ।
कालो कफी र मुटुको स्वास्थ्यमा हालसम्म गरिएको थुप्रै अध्ययनहरूमा यो प्रमाणित भएको छ कि दैनिक १ वा २ कप कालो कफी पिउँदा स्ट्रोकलगायत हृदय रोगको जोखिम कम हुन्छ। यसको मतलब यो हो कि लामो समयको लागि कालो कफी सेवन गर्दा तपाईंको मुटु बलियो हुन्छ। साथै, कालो कफीमा एन्टीआक्सीडन्ट पनि हुन्छ, जसले रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्छ र बीपी नियन्त्रणमा हुन्छ यसले हृदय रोगको जोखिमलाई पनि कम गर्दछ।
३.कालो कफी कलेजोको लागि फाइदाजनक।
कालो कफी पिउने अर्को फाइदा यो हो कि यसले तपाईंको कलेजो स्वास्थ्य सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। कलेजो हाम्रो शरीरको महत्त्वपूर्ण अंगहरू मध्ये एक हो त्यसैले यसको कार्य हाम्रो स्वास्थ्यको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कालो कफी पिउँदा कलेजोको क्यान्सर, हेपेटाइटिस, फ्याटि कलेजो र कलेजो सिरोसिस जस्ता धेरै रोगहरूबाट बच्न मद्दत गर्दछ। धेरै अध्ययनहरूले पत्ता लगाइसकेका छन कि जो मानिसहरू दैनिक ४ कप कालो कफी खान्छन् उनीहरूमा कलेजो रोगको जोखिम एकदम कम हुन्छ।
४.कालो कफीले वजन घटाउन मद्दत गर्दछ।
कालो कफीमा उच्च क्याफिन रहेको हुन्छ, यसले शरीरको मेटाबोलिक गतिविधि ५० प्रतिशतसम्म बढाउँछ, जसले पेटको बोसो घटाउन मद्दत गर्दछ। यस बाहेक, कालो कफिले ऊर्जाको स्तर बढाउन मद्दत गर्दछ जसले भोक कम गर्दछ। साथै, कालो कफीमा एन्टीआक्सीडन्ट पनि हुन्छ जसले वजन घटाउने प्रक्रियामा सहयोग गर्दछ। र, माथी उल्लेख गरिए अनुसार, कालो कफीमा क्यालोरी, फ्याट, कोलेस्ट्रोल र कार्बोहाइड्रेट हुँदैन, त्यसैले यो पिउँदा तौल बढ्दैन।
५.कालो कफीले मधुमेहको जोखिमलाई रोक्छ।
डायबिटीज एक यस्तो रोग हो जसले शरीरमा धेरै रोगहरू निम्त्याउँछ। यस्तो अवस्थामा, मधुमेहको जोखिमलाई दैनिक रूपमा कालो कफि सेवन गरेर कम गर्न सकिन्छ। कालो कफीले शरीरमा इन्सुलिनको उत्पादनमा मद्दत गर्दछ त्यसैले मधुमेहको खतरा हुँदैन।
६.कालो कफीले पेट सफा गर्छ।
यदि हामी कुनै पनि प्रकारको अस्वास्थ्यकर चीजहरू खान्छौं भने विषाक्त पदार्थहरू हाम्रो पेटमा जम्मा हुन थाल्छन्। तर कफी एक मूत्रवर्धक (मूत्रवर्धक) पेय हो। यसको मतलव तपाईले ब्ल्याक कफी पिउँने बित्तिकै पिसाब आउनेछ र यसले शरीरमा भण्डारण भएका विषाक्त र ब्याक्टेरियाहरूलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्दछ। यस कारणले, तपाईंको पेट सफा रहन्छ र स्वस्थ पनि कायम रहन्छ।
७.कालो कफिले मुड सुधार गरेर तनाव कम गर्दछ।
कालो कफीको सेवनले स्नायु प्रणालीलाई उत्तेजित गर्दछ, जसले शरीरमा खुशीको हार्मोनको उत्पादन गर्दछ। यसले तपाईंको मुडलाई राम्रो राख्दछ र कुनै पनि प्रकारको तनाव र उदासीनता हटाउन मद्दत गर्दछ। यसरि तपाईं ब्ल्याक कफी हरेक दिन उपभोग गर्नुसक्नुहुन्छ, र तनाव कम हुनेछ साथै यसले तनावसँग लड्न पनि मद्दत गर्दछ।
कालो कफीका साइड इफेक्टहरू।
तौल घटाउने देखि मुटुलाई स्वस्थ राख्नको लागि, कालो कफीको सेवन धेरै किसिमले फाइदाजनक छ, तर अन्य चीजहरू जस्तै, यदि कालो कफी धेरै मात्रामा सेवन गरीन्छ भने, यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन सक्छ।
१.कालो कफि अत्यधिक सेवन गर्दा तपाइँको निद्रामा असर पर्न सक्छ र निद्रासँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरू हुनसक्दछ। त्यसकारण तपाईं रातमा पर्याप्त र राम्रो निद्रा चाहनुहुन्छ भने, सुत्नु अघि कम्तिमा २ वा ३ घण्टा पहिले कफी सेवन नर्गनुहोस।
२.कालो कफीमा क्याफिन र एसिडको मात्रा उच्च हुन्छ, त्यसकारण धेरै कफी पिउँदा पेटको एसिडिटीको समस्या हुन सक्छ। थप रूपमा, पेटमा गडबड् पनि हुन सक्छ।
३.यदि तपाईंको शरीर क्याफिनप्रति संवेदनशील छ भने, धेरै कालो कफी पिउनाले धेरै साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ जस्तै आत्तीने, बेचैनी वा अशान्ति, दिक्क लाग्ने, आदि।
४.यस बाहेक, धेरै कालो कफी पिउँदा टाउको दुखाइ, पेट दुखाइ, मांसपेशिको समस्या र अनियमित मुटुको धड्कन जस्ता समस्या हुन सक्छ।